Ducada si habsami leh u dhasho. ? Gaarsiin wacan
U soo ducee dhalmo la'aan dhibaatooyin la'aan Way naga caawin karaan markasta iyo gaarsiinta wanaagsan. Waxay naga caawin kartaa inaan ka gudubno waqtigan adag sida nolosha adduunka.
In kastoo aysan u ekaan karin oo dadka qaar waxay u arkaan dhacdadan si dabiici ah, runtu waxay tahay inay tahay xaalad jilicsan oo hooyada iyo ilmaha caloosha ku jira markasta khatar ku jiraan. Awood u lahaanshaha inaad codsato gaarsiin habsami leh waxay u keeni kartaa hooyada kalsooni iyo nabad.
Intaa waxaa sii dheer, salaaddani waxay u tahay raaxada xasilloonida xubnaha qoyska maxaa yeelay waad ogtahay taas salaaduhu waa xoog badan yihiin iyo in dhalashada ma aha wax sahlan, sidaa daraadeed xubinta qoyska ee magan galyada salaada waxay heli kartaa nabad iyo xasillooni siisa kalsoonida siisa ogaanshaha in Eebbe qudhiisa daryeela labada nololeed waqtigaas.
1 Salaadda loogu talagalay gaarsiinta aan la isku hallayn karin Waa maxay ujeeddada salaadda?
2 1) Ducada loogu tala galey umana imaan wax dhibaatooyin ah
3 2) Salaadda Saint Ramon Nonato ee dhalmada (dhalasho wanaagsan)
4 3) Salaadda haweenka uurka leh inay dhasho
5 4) Salaadda kahor umulida (si wanaagsan u soco)
Salaadda loogu talagalay gaarsiinta aan la isku hallayn karin Waa maxay ujeeddada salaadda?
Ujeeddada laga leeyahay salaadda inay dhasho wanaagsan gaar ahaan waa in hooyadi iyo cunugii ku jiray jidkiisa ay fiicnaan karaan, dhalasho dhib ma laha wax walbana si dhakhso leh ayey u socdaan.
Tukashadani waxay bilaabmi kartaa bilowga uurka maadaama ay sidoo kale adeegto nabada iyo xasilloonida qoyska oo dhan. Gelitaanka geedi socodka dhalashada maskaxda murugada ama wadnaha waa mid aad u khatar ah waana sababtaas sababta salaaddan ay muhiim u tahay.
1) Ducada loogu tala galey umana imaan wax dhibaatooyin ah
«Maryan, hooyo jacayl qurux badan, Gabar macaan oo reer Naasared ah, oo ku dhawaaqday weynaanta Rabbiga oo, adigoo leh, haa, ka dhigtay nafta hooyada Badbaadiyeheenna iyo hooyadeena: Maanta dhegeyso baryada aan ku tukado:
Gudaha aniga nolol cusub ayaa ku soo kordhay: mid yar oo keena farxad iyo farxad, walwal iyo cabsi, rajooyin, farxad gurigeyga. Isaga ilaali oo badbaadi, Oo intaan naftayda ku qaado,
Iyo taas, daqiiqada farxadda leh ee dhalashada, markii aan maqlo codkooda ugu horeeya oo aan arko gacmahooda yar, Waxaan uga mahadcelin karaa Abuuraha sida la yaabka leh ee hadiyaddan uu ii siiyo.
Taasi, anigoo raacaya tusaalahaaga iyo moodalkaada, waan raaci karaa oo arki karaa wiilkeyga oo koraya.
I caawi oo i dhiirrigeli si aan u helo hoy aan ku hoydo, isla mar ahaantaana, bilow bilow ah oo aan ku qaadno waddooyinkaaga.
Sidookale, Hooyoow, fiiri gaar ahaan dumarkaas wajahaya xilligan oo kali ah, la'aan la'aan ama jacayl la'aan.
Iyagu ha dareemaan jacaylka Aabaha oo ha ogaadaan in cunug kasta oo dunida yimaada inuu barako leeyahay.
Ogeysii in go'aanka geesinimada leh ee soo dhaweynta iyo kobcinta cunugga la tixgalinayo.
Marwadayada Sugitaanka Macaan, sii jacaylkaaga iyo geesinimadaada. Aamiin. "
Waa inaad duco aamin u keenis dhib la'aan.
Dhibaatooyinka foosha oo buuxa waa suuragal in hooyo kasta ay ku dhacdo.
Ka soo bax hawshan gacanta Rabbiga Ilaaha ah oo dhan xoog badan, adoo isku halleeya in tukashadu ay xoog badan tahay iyo in Ilaah qudhiisa iyo Maryantii Barakeysan ay daryeeli doonto labada nololeed ee hawshan.
Waa lagama maarmaan in la is dejiyo oo samir la yeesho si loo sugo wax kasta oo midho dhala. Ilaah waa awood badan yahay isaga wax kasta oo aan macquul ahaynna ma jiraan, isagu had iyo goor diyaar ayuu u yahay inuu na dhageysto oo uu na caawiyo wakhti kasta.
2) Salaadda Saint Ramon Nonato ee dhalmada (dhalasho wanaagsan)
«Oh, kaaliye sare, Saint Ramón, oo ah tusaalaha samafalka masaakiinta iyo saboolka, halkan waxaad igu leedahay inaan si is -hoosaysiin leh ugu sujuudo cagahaaga si aan uga baryo caawimaaddaada baahiyahayga.
Maaddaama ay ahayd farxadda kuugu weyn ee aad u gargaartid saboolka iyo kuwa baahan ee dhulka jooga, waxaan kaa baryayaa inaad tahay sharaftaada, Saint Ramon, markay dhibaatadaydu tahay.
Adiga, ilaaliyaha sharafta leh waxaan u imid inaan u duceeyo wiilkayga aan ku qaado laabteyda.
Ka ilaali aniga iyo cunugayga indhahayga hadda iyo inta lagu gudajiro dhalmada.
Waxaan idiin balan qaadayaa inaad isaga ku bari doontaan sharciga iyo amarada Ilaahay.
Dhageyso tukashadeyda, gacaliyahayga, San Ramón, oo iiga dhig hooyo faraxsan wiilkan aan rajeynayo inaan ku dhasho baryadaada xoogga badan.
Sidaas ha noqoto ”.
San Ramón Nonato waxaa loo yaqaanaa badbaadada haweenka uurka leh. Wuxuu noqdaa shafeeca sababaha adag maxaa yeelay noloshiisa wuxuu ku qasbanaaday inuu soo maro duruufo adag oo ka adkaada dhammaantood oo uu had iyo goor u adeego Rabbiga. Wacdinta injiilka iyo caawinta kuwa baahan ayaa ah wax markasta lagu garto. Ilaa maantadanna wuxuu sii ahaan doonaa caawiye aamin ah xilliyadan ay jiraan walwal iyo cabsi badan.
3) Salaadda haweenka uurka leh inay dhasho
«Maryan oo bikrad ah, hadda oo aan noqonayo Hooyo sidaad ahaan jirtay, i sii qalbi kula mid ah, ku adkayso kalgacalkeeda oo aan ka leexanayn aaminnimadiisa. Qalbi kalgacal leh oo ka dhalaalaya damqasho deggan oo aan diidanayn inuu naftiisa siiyo dadka kale.
Qalbi ... jilicsan ayaa awood u leh inuu jacayl geliyo faahfaahinta yar iyo adeegyada is-hoosaysiinta. Qalbi daahir ah oo aan lagu arkin xariifnimo, furfuran, oo lagu farxo farxadda dadka kale. Qalbi macaan oo wanaagsan oo aan cambaareyneynin qofna waligiisna daalin cafis iyo jacayl.
Ilaahow, waxaad si fiican u muujisay jacaylka aad u qabtid addoonkaaga Saint Ramon Nonato, adoo ku soo nooleeyey nolol si la yaab leh waxaadna u dhigtay inaad adigu difaacdo kuwayaga hooyooyinka noqonaya; mudnaantaada iyo ducadaada, waxaan kaa baryayaa in nolosha cusub ee aad igu tarmisay ay farxad ku badato tirada carruurtaada.
Salaadda loogu talagalay haweenka uurka leh markay ummulayso waa mid aad u xoog badan.
Marka haweeney uur leedahay, waqtiga dhalashada, in kasta oo la qorsheeyay, ayaa laga yaabaa inay ku dhammaato wax yaab leh qoyska oo dhan waana sababtaas awgeed waa inaan had iyo jeer maskaxda ku heyno ducadan qaaska ah ee waqtiga dhalmada.
Hooyada ayaa ah Sababta kalsoonida iyo xasiloonida ayaa leh jumlad la soo celin karo Inta lagu gudajiro habka dhalashada ama qoysku waxay sameyn karaan salaadan inta ay sugayaan.
Waxaan weydiisan karnaa gaarsiinta inay dhakhso noqoto, inay xanuun la'aan tahay in wax walba si hagaagsan u socdaan iyo codsiyo aan dhammaad lahayn ay noqon doonaan sida laga soo xigtay baahida qof kasta laakiin aaminaad weyn ayaa leh in jawaabtaas ay imaan doonto.
4) Salaadda kahor umulida (si wanaagsan u soco)
«Rabbiyow, Aabbaha Qaadirka ah! Qoysku waa hay'adda ugu faca weyn bini -aadamnimada, waxay la mid tahay sida ninka oo kale.
Laakiin, maxaa yeelay kani waa hay'ad kuu gaar ah iyo habka kaliya ee uu ninkan u imaan karo adduunkan uguna horumarin karo dhammaystirka buuxa, xoogagga sharku way soo weerarayaan, waxayna ragga u horseedaan inay quudhsadaan unugga aasaasiga ah ee ilbaxnimada. Masiixi ah
Markay isku deyayaan inay is dilaan, waxay isku dayaan inay dhabarjab ku dhuftaan qoysaska. Noo oggolow inaan ku guuleysanno hawshaas mugdiga ah, Sayidow, qorshayaashaas burburka leh ee ku saabsan qoyska masiixiga.
Iyada oo loo marayo shafeeca sharafta leh ee addoonkaaga Saint Ramon Nonato, qareenka difaaca jannada xagga farxadda, wanaagga iyo nabadda qoysaska Masiixiyiinta ah, waxaan kaa baryaynaa inaad dhageysatid tukashadeena.
Marka la eego mudnaanta mudan, shaqaalaheenna, wuxuu na siiyaa in guryaha had iyo jeer lagu qaabayn karo raacitaanka Quduuska ah Naasared.
Ha u ogolaan cadowga nolosha qoyska Christian in uu ku guuleysto weeraradooda diineed, laakiin taa beddelkeeda, u beddelo runta runta ammaanta magacaaga quduuska ah.
Dunida Ruuxi ahaaneed waa xaqiiqo ay tahay inaan ka digtoonaano waqti kasta. Diyaargarowga waxwalba xilligan la bixinayo sidoo kale waxaa ku jira nolosheena ruuxiga ah maxaa yeelay waa halka ay shucuurta ama shucuurtu ku noolyihiin taas oo naga dhigi karta inaan dareemo xumaan ama quusasho daqiiqad dhexdeeda sida jilicsan, khatar ah oo mucjiso ah sida dhalashada nolol cusub.
Kahor umulinta waxaan la tukan karnaa qoyska, waalidka canugga waalidkiis iyo asxaab aan dareensanahay ku biirista salaada isbedel ku sameyn kara wanaag dhalashada dhexdeeda. Salaaduhu waa xoog badan yihiin haddii lagu sameeyo iimaan iyo qalbiyadooda oo ma jiro salaad daacada ah oo ka badan tan aabaha ama hooyada carruurtooda.
Had iyo jeer iimaan ku qabo duco si aad u weydiisato oo aad u hesho gaarsiinta wanaagsan oo aan dhibaatooyin lahayn.